Polska, shaydaanka qoob ka ciyaarka Iswiidhan | Safarka Absolut
Kuwa ugu caansan cayaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Suecia waa polska (inaan lagu jahwareerin polka ama polka, oo asal ahaan ka soo jeeda Bartamaha Yurub). Qoob-ka-ciyaarkan, oo ku dhowaad dhammaan dabaaldegyadii dhaqanka ee dalka, ayaa sidoo kale leh taariikh xiise leh oo ka dambeysa, iyadoo sidoo kale loo yaqaan magaca "Qoob ka ciyaarka Ibliis".
Si ka duwan waxa ka dhaca dalalka kale ee Yurub, Iswiidhan waxaa muusig dhaqameed (muusikada dadweynaha) ayaa ka nool sidii hore. Waxaa jira kooxo badan oo dad ah oo kobciya dhaqanadan soo jireenka ah, oo jiilba jiil u sii dhiibanayay. Ku spelmansstämmor, eray loo turjumi karo "muusikiiste urursan", waa xaflado yar yar oo muusig ah, dhacdooyinka ugu habboon ee loogu soo dhowaado dhaqankan muusigga iyo helitaanka soojiidashada cayaaraha Iswiidhishka sida polska.
Laga bilaabo Juun ilaa Sebtember, xafladaha dibedda waxaa lagu qabtaa waddanka oo dhan. Guud ahaan, kuwani waa shirar yaryar, in kastoo qaarkood, tusaale ahaan, kan Bingjo, oo dhacda bilowga bisha Luulyo, waxay kulmisaa kumanaan qof. Dhammaantood dhammaantood chordsyada farxadda leh ee polska marwalba way dhawaaqaan.
1 Asalka Polska
2 The Polska ee Iswiidhan
2.1 Noocyada gobolka
3 Halyeeyga Ibliis
Sida magaceedaba ka muuqata, xididdada polska waxay dib ugu laabanaysaa saamaynta boqortooyadii Poland wadamada waqooyiga Yurub bilawgii qarnigii toddoba iyo tobnaad (af iswiidhishka ereyga polska sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo luqadda Poland).
Si kastaba ha noqotee, aqoonyahanno badan ayaa sheegta in marka laga reebo magaca, qoob-ka-ciyaarka iyo muusikada iswidhishka ee ay leedahay si gaar ah xididdada Iskandaneefiyaanka. Waxaa laga yaabaa in dhalashada polska ay ka dhalatay isku dhafka u dhexeeya dhaqamada kala duwan ee muusikada, kuwaas oo u rogi lahaa qaabkooda hadda.
Runtu waxay tahay in wadamada kale ee Waqooyiga Yurub sida Norwey, Danmark o Finlandia Polska sidoo kale waa la dheeliyaa, in kastoo noocyo kala duwan. Iswiidhishka polska waa laxan leh qaab la mid ah kan been ah. Si loo dheesho, waxay qaadataa ugu yaraan afar qof, sida ay ugu dhacdo kuwa minuet. Si kastaba ha noqotee, polska waxaa loo dheeliyaa si firfircoon oo ka yar. Xaqiiqdii, qaab dhismeedkeeda iyo jaangooyooyinkeeduba waxay uga dhowyihiin kuwa qoob-ka-ciyaarka dhaqameed ee Balkan-ka qaarkood marka loo eego qoob-ka-ciyaarka aristocratic-ka ah ee ka soo baxay salooniyada quruxda badan ee Yurub ee qarnigii XNUMX-aad. Tusaalaha ugu fiican ee waxaas oo dhan waxaan ku haynaa waxyaabaha soo socda video:
The Polska ee Iswiidhan
Polska waxaa lagu ciyaaray oo lagu cayaarey Iswiidhan dhowr qarniyo. Dhaqanka ayaa laga soo waday aabbe ilaa wiil, inkasta oo qaababka kala duwan ee gobolku isbeddeleen waqti ka dib.
Laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, heesihii hore ee caanka ahaa ayaa bilaabay in lagu qoro dhibcaha muusikada. Shaqada fanaaniin badan awgeed, polska wuu badbaaday, sida waxay ahayd in la waayo intii lagu jiray xilligii warshadaynta dalka, oo la timid qaxii miyiga, ka tagistii tuulooyin fara badan iyo iloobin dhaqammadii hore ee soo jireenka ahaa.
Dhab ahaan, xiisaha ku jira soo kabashada polska waxay soo baxeysaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, oo leh dadaallo badan oo gaar loo leeyahay oo ka kooban kooxo dhaqameed iyo dad, ka codsanaya xusuusta iyo dhaqanka dadka ugu da'da weyn ee ka kala yimid gobollada dalka. Polskas badan oo duug ah ayaa la badbaadiyay oo muusikadoodu mar labaad ayay ciyaareen tobanaan sano markii ugu dambeysay ee la ciyaaray.
Iswiidhan gudaheeda, qaababka kala duwan ee loo yaqaan 'polska' waxaa lagu kala saaraa iyadoo loo eegayo gobol kasta. Kuwani waa noocyada ugu caansan:
La XNUMXaad note polska, ka jilicsan oo ka labis badan, waxaa lagu dhaansadaa koonfurta Sweden, gaar ahaan gobolka Scania iyo xeebta bada Baltiga.
La sideedaad polska Waxaa lagu dhaansi ficil ahaan dalka oo dhan, in kasta oo ay si gaar ah caan ku tahay gobolka dhexe ee Dalarna.
La polska saddexlaab waa qaabka caadiga ah ee gobollada buuraleyda ah ee galbeedka Iswiidhan (Varmland, Jamtland y Harjedalen), ee ugu dhow xadka Norwey.
Laakiin, Maxaa loo yaqaan "polska" loo yaqaan "Ciyaarta Ibliis"? Magacani wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa halyeey xiise leh.
Halyeeyga "Devil's dance"
Sida ka muuqata fiidiyaha kore, fiddle waa aaladda ugu muhiimsan marka la ciyaarayo polska. Mararka qaarkood qoraalada violins-ka ayaa sii dheereeya oo gaara codad aad u sarreeya oo ay na xasuusiyaan dhawaqyada xayawaanka ama xitaa muusikada adduunka kale.
Halyeeyada ayaa leh hal mar, koox dad ah oo ka yimid magaalo iswiidhish ah oo la yiraahdo horga isugu soo ururay violinist si uu u dhagaysto muusikadiisa iyo qoob ka ciyaarkiisa. Hal mar, bartamaha xafladda, dabeecad la yaab leh oo gabi ahaanba ku labisan madow ayaa u muuqatay oo weydiisatay in loo oggolaado inuu ciyaaro violin. Markuu qalabkii gacanta ku jiray ayuu bilaabay inuu ciyaaro laxan hypnotic iyo qandho leh: polska.
Taasi waxay ahayd xoogga muusikadaas oo aan cidina joogin oo joojin karin qoob-ka-ciyaarka. Sidaas bayna ku sii socdeen ilaa ay ka dhinteen, gebi ahaanba daallan. Qalfoofkoodu qoob-ka-ciyaarka wuu sii waday oo waxay ku dhammaadeen inay ka soo rogaan buurta. Dhibaatooyinkaas liita waxay ahaayeen dhibanayaal "Qoob ka ciyaarka Ibliiska". Xaqiiqdii, isagu isagaa ahaa, ninka qarsoodiga ah ee madow, ee u ciyaarayay violin si uu ula geeyo Naarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Polska, sheydaanka qoob ka ciyaarka Iswiidhan
Anigu waxaan ahay monse iyo haddii aan ka helo